Kedu mkpụrụ akwụkwọ kachasị mma maka Email? Gịnị Bụ Email Nchekwa Akara Aka? | Martech Zone
Thursday, July 27, 2017 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
All nụla mkpesa m niile na enweghị ọganihu na nkwado email kemgbe ọtụtụ afọ ka m wee ghara itinye oge (oge dị ukwuu) na-ebe ákwá maka ya. Naanị m chọrọ ka otu nnukwu onye ahịa email (ngwa ma ọ bụ ihe nchọgharị), ga-apụ na mkpọ ahụ ma gbalịa ịkwado nsụgharị HTML na CSS kachasị ọhụrụ. Enweghị m obi abụọ ọ bụla na ụlọ ọrụ na-emefu ọtụtụ iri nde dollar iji mezie ozi ịntanetị ha.
Ọ bụ ya mere o ji dị mma ịnwe ụlọ ọrụ dịka Email Monks ndị na-anọdụ ala n'akụkụ akụkụ ọ bụla nke imewe email. Na ozi ọhụụ ọhụrụ a, Ihe odide na ozi ịntanetị, otu na-ejegharị gị site na ederede ederede na otu esi ede akwụkwọ dị iche iche na njirimara ha iji hazie ozi ịntanetị gị. 60% nke ndị ahịa email na-akwado mkpụrụedemede ederede eji eme ihe na atụmatụ email gị gụnyere AOL Mail, Native Android Mail App (ọ bụghị Gmail), Apple Mail, iOS Mail, Outlook 200, Outlook.com, na email metụtara Safari.
Enwere 4 Font Ezinyere E-mail
Serif - Serif Akara ókwú nwere mkpụrụedemede nwere oghe, isi ihe na ọdịdị dị na nsọtụ nke ụtarị ha. Ha nwere ụdị ọdịdị ha, mkpụrụedemede sara mbara na ịhazi ahịrị, na-eme ka ọgụgụ isi dịwanye mma. Mkpụrụ akwụkwọ kachasị ewu ewu na ụdị a bụ Times, Georgia na MS Serif.
Sans Serif - Sans serif mkpụrụedemede dị ka ụdị nnupụisi ahụ na-achọ ịmepụta echiche nke aka ha ma yabụ na enweghị ụdị 'ịchọ mma' achọrọ. Ha nwere ụdị ọdịdị nke na-akwalite ịdị irè karịa anya. Mkpụrụ akwụkwọ kachasị ewu ewu na otu a bụ Arial, Tahoma, Trebuchet MS, Open Sans, Roboto na Verdana.
Ugbo ala - Site n'ike mmụọ nsọ typewriter font, ederede a nwere ngọngọ ma ọ bụ 'slab' na njedebe mkpụrụ edemede. Agbanyeghi na ejighi ya na HTML HTML, imirikiti 'fallback' ozi ederede edeturu na otutu ozi email MultiMIME jiri akara ndia. Iji ozi ederede a na-agụ email na-enye mmetụta nchịkwa metụtara na akwụkwọ gọọmentị. Courier bụ akwụkwọ akacha eji na nke a.
Ihe ọkpụkpọ - Iomi mkpụrụedemede ejiri aka dee nke oge gara aga, ihe na - eme ka mkpụrụedemede ndị a dị iche bụ mmegharị na - agagharị na agwa ọ bụla na - eso. Akara edemede ndị a na-atọ ụtọ ịgụ nke ọma, mana ịgụ ha na ihuenyo dijitalụ nwere ike bụrụ ihe na-agwụ ike ma na-emebi anya. Ya mere, a na-ejikarị ụdị mkpụrụedemede eme ihe na isiokwu ma ọ bụ logos n'ụdị onyonyo.
Email-safe fon gụnyere Arial, Georgia, Helvetica, Lucida, Tahoma, Times, Trebuchet, na Verdana. Omenala ederede gụnyere ezinụlọ ole na ole, na ndị ahịa na-anaghị akwado ha, ọ dị mkpa ịdebanye na mkpụrụedemede ọdịda. Zọ a, ọ bụrụ na ndị ahịa enweghị ike ịkwado font ahaziri ahazi, ọ ga-alaghachi na font nke ọ nwere ike ịkwado. Maka nyocha miri emi karị, gbaa mbọ gụọ akụkọ Omnisend, Email Akara Aka Fonts v Fonts Omenala: Ihe I Kwesịrị Knowmara Banyere Ha.
Jide n'aka na ịpịrị-ọ bụrụ na ịchọrọ ịmekọrịta ozi ahụ.
Tags: Ozi AOLakwụkwọ ozi apụlArialcalligraphyemailemail edemedendị mọnk emailemail mma Akara ókwúada-azụ Akara ókwúmkpụrụedemede ọdịdaAkara ókwú na emailGeorgiaHelveticaiOS OziLucidamonogramNwa ama gam akporo Mail App (ọ bụghị Gmail)Outlook 200Outlook.comEmail dabeere na Safarienweghị serifserifKachasị mmaTahomaugboroTrebuchetederedeVerdana
Jul 28, 2017 na 10: 04 AM
Hi Douglas, ihe na-atọ ọchị ma na-atọ ụtọ ịgụ. M nwere ajụjụ banyere nke a “60% nke email ahịa ugbu a na-akwado omenala Akara ókwú tinye n'ọrụ na gị email aghụghọ”. Enwere ọrụ ọ bụla na-aga n'ihu ma ọ bụ nkà na ụzụ ọhụrụ iji mee ka ihe dị nso na 100%?
Jul 28, 2017 na 10: 06 AM
Chei, m chọrọ! Echere m na ọ bụ nchikota nke ndị ọrụ na-anaghị emelite yana ụkpụrụ dị njọ na email. Ọ bụ ihe nwute n'ihi na anyị niile!